Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Ny vaksiny Rosiana Sputnik V dia nekena ho an'ny fidirana an'i Israely
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny manampahefana israeliana dia nanome fankatoavana ny fidiran'ny olona voan'ny vaksiny Sputnik V COVID-19.
Ny olona vita vaksiny Sputnik V dia mety hitsidika firenena 31 amin'ny fitambarany tsy misy fankatoavana fanampiny mifandraika amin'ny COVID-19.
Ny PCR ratsy na ny fitiliana antibody tsara amin'ny fidirana dia manitatra izany amin'ny firenena 50 fanampiny.
Ilaina ny confinement tsy maintsy atao any amin'ny firenena 20 fanampiny.
Ny Tahiry fampiasam-bola mivantana Rosiana (RDIF, tahirim-bolam-panjakana Rosiana) dia manambara fa ny manampahefana israeliana dia nanome alalana ny fidiran'ny olona voan'ny vaksiny. Sputnik V Vaksiny fanefitra covid19.
Fepetra fototra amin'ireo firenena mamela ny fitsidihana manaraka Sputnik V vaksiny*:
Ny PCR ratsy na ny fitiliana antibody tsara amin'ny fidirana dia manitatra izany amin'ny firenena 50 fanampiny;
Firenena 15 ihany no mila vaksiny ankoatra Sputnik V. Ny 5 amin'ireo firenena ireo ihany, anisan'izany i Etazonia, no miantehitra tanteraka amin'ny World Health Organization (WHO)lisitry ny vaksiny nankatoavina.
* Visa sy (na) fahazoan-dàlana fidirana hafa ilaina, Ny olona iray dia tokony hahafeno fepetra hafa tsy mifandraika amin'ny fameperana coronavirus. Ny famakafakana ny fahafahana miditra dia mifototra amin'ny fepetra takian'ny mponina any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ary mety tsy hita taratra ny fameperana na ny fanararaotana manankery ho an'ny firenena voafantina na sokajy sasany. Firenena 27 no mbola mihidy sisintany ho an'ny mpitsidika avy amin'ny ankamaroan'ny firenena hafa.